Ogaden News Agency (ONA) – BOGAADIN- Kalfadhigii 7aad ee Jabhadda JWXO oy kasoo baxeen Go’aamo Tayo & Toox leh + Dardaaran, By: Xaaji M/rashiid.
BOGAADIN- Kalfadhigii 7aad ee Jabhadda JWXO oy kasoo baxeen Go’aamo Tayo & Toox leh + Dardaaran, By: Xaaji M/rashiid.
Posted by Daljir	/ April 1, 2017
Bani’aadamka waxaa la dhalaa iyagoo xor ah, waxa agtooda ugu qaalisan ee ay ku faanaan isla markaana jecelyihiin waa inuu xornimo ku noolaado. Arintaasi waa mid ku abuuran oo uu lasoo dhashay ee ma’aha mid sheekh kusoo wacdiyay aaydana u daliiliyay, haduu taa waayana waxa kale ee uu haysto waxba kama soo qaado. Waxaa jirtay Qiso dhacday sabankii uu amiirka ahaa Cumar Binu Khadaab Rabi haka raali noqdee, waxayna u dhacday sidan soo socota-
Waxaa jiray wiil uu dhalay nin madax ka ahaa Dalka Masar, markaasay isaga iyo wiil kale baratansiiyeen fardahoodii. Faraskii uu watay wiilka uu dhalay ninka madaxda ah ayaa laga badiyay, kadibna intuu cadhooday ayuu shaabuug la dhacay saaxiibkii isagoo ku dhawaaqaya waxaan ahay Qoys wanaagsan wiilkood! madluumkii oo looga baqay inuu dacwoodo ayaa xabsi la dhigay, waxaase uu suuro gashay inuu baxsado oo uu Madiina iyo amiirkii muslimiinta beegsado. Markuu nabad gaadhay Amiirkii ee uu sharaxay qisadii iyo siday wax u dhaceen, Cumar binu khadaab waxuu qoray waqad isagoo dalbaday inay daalimkii iyo aabihiiba soo xajiyaan si gartii loo qaado. Anigoo soo koobaya Amiirku wuxuu kuyidhi Qoyskii “goormaad gaadheen imaad dadka guumaysataan iyagoo Hooyooyinkood xornimo ku dhaleen? wuxuu amray dulmanihii inuu daalimka halkiisa ku garaaco kana aar goosto! kadibna wuxuu Amiirku khiyaar galiayay inuu Odaygana ku daro, laakiin wuu diiday oo gobanimada ayuu doorbiday.
Jabhadda wadaniga ah ee xoreynta Ogadenya oo ah mid ku caan baxday inay difaacdo guud ahaan karaamada umada soomaaliyeed ayaa si joogta ah u wadda dagaalka ay kaga soo horjeeddo guumaystaha Madow ee kooxda tigreegu horboodayaan. Golaha dhexe ee jabahadda oo ah Baarlamaanka rasmiga ah ee uu shacabka soomaalida ogadenya aqoonsanyahay ayaa qabta kulamo xasaasi ah oo diiraadda lagu saaro kolba marxaladda markaa taagan, wixii lasoo dhaafay iyo Mustaqbalkaba Waxaa iyadana la ogyahay inay Jabhaddu Sanadahan dambe u fidiso taakulayn siyaasadeed guud ahaan jabhadaha kale ee xornimo doonka ah ee la dagaalama Taliska Woyaanaha.
Taliska guumaysiga itoobiya ayaa jabhadda JWXO u arka Wadkii meesha kasaari lahaa oo ayna sinaba uga badbaadi doonin iyagoo xoogga saara kaliya siday ku heli lahaayeen waxyar oo muddo dheeraysi ah. Waxay jabhadu ku guulaysatay inay heegan ahaato oy lamid noqoto dhagax wayn oo dul taagan taliska Adis ababa, balse kaliya la sugayo goortii uu bashaaqi lahaa!
Aan dhuuxa qoraalka u gudbee badhtamihii bisha Maarso 2017,ka waxaa fooda is galiyay Golaha looga taliyo halganka lagu xoreynayo dalka Ogadenya kaasoo ah Baarlamaanka matala shacabka somalida ogadenya iyo Jabhadda lafteedaba. jabhadu waxay qabataa kulamo isdaba socda, balse midka loogu yeedho Kalfadhiga ayaa ah kan ugu miisaanka culus. Waxaan odhan karaa waa kulanka fashilka ka ilaaliya Ururka iyo halgankiisa, maadaama oo la qeexayo waddo cad oo kaliya u baahan in laqaado.
Kalfadhiga Golaha dhexe ama Baarlamaanka iyo go’aamadii kasoo baxay waxaan u arkaa inay walbahaar ku beereen Maamulka itoobiya ee dhagarta qaba. Kulanka oo ah mid ay duruus badani ku dhex aasantahay waxaa muhiim u ah jabhadaha kale inay ku daydaan saxiibadooda uga waayo aragsan xaaladaha xarbiga ee lagu jiro.
DARDAARAN KU SOCODA GOLAHA BAARLAMAANKA EE JWXO-
Dardaarankeyga kama dambayska ah ee ku wajahan Baarlamaaanka JWXO ee nadiifta ka ah Mooshinka iyo Balaayooyinka Geeska Afrika wareegaya wuxuu u dhacayaa sidan soo socota- Fardi kasta oo Golaha dhexe kamid ah, ama golaha sare waxaa wanaagsan inuu saaxiib dhow la noqdo daacadnimada oo ah hantida maguurtada ah ee uu lasoo shir tagayo. Waxaan sidaa carrabka ugu adkaynayaa, Haduu sii noolaado iyadaa anfici, haduu tii xaqa ahayd la kulmana iyadaa anfici oo Suubanahaa yidhi SCW-انما لكل امرئ ما نوي Ruux kastaa wuxuu leeyahay waxa uu niyoodo, sidoo kale wuxuu yidhi-يبعث كل عبد علي ما مات عليه Ruux kasta waxaa lala soo saari wixii uu ku dhintay! Waxaa inala wada xidhiidha naf iyo shaydaan oo ah cadaw kugu lifaaqan loona baahan yahay in laga digtoonaado. Matiiryaalka halganku marbuu daciifi karaa marna wuu xoogaysan karaa, laakiin Daacadnimada oo fadhigeedu yahay Qalbiga shaqsi wailba isgaa xukuma. Markuu Rasuulku umadda dhisayay waxaa kamid ahaa daraarankiisa inay madaxdooda adeecaan xataa haduu yahay mid ay wax ku dhaamaan wuxuuna yidhi- عليكم بالسمع والطاعة وان تامر عليكم عبد حبشي- War is maqla oo is adeeca xataa haduu maddax idiin noqdo adoon madow. Hadalkan ayaa u muuqda mid kusocday Carabta oo xoogaa isla wayni ah lagu tuhmayay. Si kastaba ha ahaatee aragtida dhabta ah een ka qabo Madaxda iyo Taageerayaalka halgankaba Gabay baan horay ugu cabiray ee akhris wacan-
Madax Baylka wada qaadatoo, Balanka wayneeya-
Askar Boobayaal kumaran, iyo Wiilal wada Boodi-
Odayaal Bilaawaha Gilgili, oo Beegsan Cadowgooda-
Ducadana sidii Burmad ugani, oo kabaqa Eebe-
Wariyaal Bartoodaa kawada, Baaqa iyo Buunka-
Bulsho wada halgamaysaan arkaa, oo Baqoola ahe-
Birmad baa Ogadenya umaqan lagu Bogsoodaaye.
WAAJIBAADKA SAARAN TAAGEERAYAALKA HALGANKA-
Dhankaa iyo waajibka saararan shacabka Geesiga ah ee soomaalida ogadenya waa arin waxbadan lagu soo waaniyay oo ah inay labada dhinac ka istaagaan madaxda JWXO ee ka kooban Ragga iyo Dumarka kuwaasoo hadh iyo Habeen usoo jeeda ama u safraya sidii ay dadkooda xornimo iyo karaamo u gaadhsiin lahaayeen Duligana uga bixin lahaayeen. Waxaa ah mid la hubo inay bulshadu sii wadi doonaan Taageeradooda ilaa iyo inta masuuliyiinta halganku ku taaganyihiin dariiqa daacadnimada. Rabi bariga shacabku wuxuu noqon karaa- اللهم ولي امورنا خيارنا ولاتولي امورنا شرارنا Allow arimahanaga noogu dhiib kuwa noogu khayr badan oo marna ha noogu dhiibin kuwa noogu shar badan.
Kalfadhiga noocan oo kale ah oo 3 sano gudahoodba mar la qabto & Go’aamada kasoo baxa ayaa cadeynaya heerka uu gaadhsiisan yahay hal adayga JWXO een aan kaleexadka lahayn. Sidoo kale hirgalinta qodobadan cusub iyo wax ka qabadka Marxaladda taagan ayaa ah mid ay u riyaaqeen bulshada somaliyeed ee Ogadenya. Tayada iyo Tooxda go’aamada golaha oo aad u sarreeya waxaa suuto gal ah inuu soo dadajiyo burbburka TPLF iyo xukuumadooda. Wuxuu Kalfadhigani dhulka ku jiiday siyaasaddii dibadda ee guumaysiga iyo Dabadhilifyadooda ee ahayd inay soo afjarayaan siyaasadda jabhadda ee daafaha caalamka. Dawlad ku sheegta Guumaysata qowmiyadaha ku hoos dulman oo la hagaastay jahli iyo siyaasad xumo waxaa afarta jiho kaga shidan Dab uu JWXO shiday oon meel laga soo qabto aan lahayn.
Dabo iyo Dacal hadaan isku soo duubo Nuxurka waxaan si aad ah u BOGAADINAYAA kalfadhiga 7aad ee JWXO oo Geeska Afrika kadhacay maalmihii lasoo dhaafay, sidaa awgeed waxaan ku sagootinayaa maqaalkan hortiina yaala Xikmadii Soomaalida ee ahayd- Faraska waxaa Shaabuuga loola dhacaa inuu Orodka sii badiyo, Guubaabadeyduna waxay ka dhigan tahay sidaas oo kale ee mahayo wax dhaliil ah. Guulaysta idan Ilaahay.
Allaah Baa Waafajinta Waligeeda ah, والله ولي التوفيق